Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण ‘मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन’ : रिम्पो योल्मो
‘मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन’ : रिम्पो योल्मो
रक्त क्यान्सरको उपचार गराईराखेका पोखराका १३ वर्षे वालक रिम्पो योल्मोको मन छुने पीडा । नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि तथा नेपाल क्यान्सर सहयोग समूहले नेपालमै पहिलोपटक साउन १८ गते शनिबार सानेपामा आयोजित पहिलो ‘सुदिप्त सुपर किड्स क्यान्सर सर्भाईभर र्याम्प वाक’मा उनले आफ्नो मनको वह पोख्दा त्यहाँ उपस्थित सबैको आँखा रसाएको थियो ।
रिम्पो यल्मोजस्तै २ देखि १८ वर्ष उमेरका क्यान्सर रोग लागेका ५० जना वालवालिकाले आफ्नो पीडा भुलेर डाक्टरहरुसंग र्याम्प वाक गरेका थिए । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनेका उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले क्यान्सर विरामी वालवालिकाको सहयोगको लागि आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक (करीव डेढ लाख रुपैयाँ) प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
………आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण डाक्टर तथा नर्सहरु, आमा बाबा, अंकल आन्टीहरु, पत्रकारज्युहरु । अनि म जस्तै क्यान्सर जितेका दाजुभाई, दिदीबहिनी र साथीहरुलाई म रिम्पो यल्मोको नमस्कार …….
मलाई लाग्छ आज हामी यहाँ यही गीतको भावको सेरोफेरोमा अल्झिएर यहाँ उपस्थित भएका छौ किनकि हामी सबै बाँच्न चाहान्छौ, मर्ने रहर कसलाई लाग्छ र । आज मेरो प्रसंग जोड्न चाहन्छु हिजोआज महामारी फैलिए जस्तै गरि दिनप्रति दिन मौलाई रहेको क्यान्सर रोग सम्बन्धी ।
मेरो नाम रिम्पो योल्मो हो । मेरो बाबा नोर्बु र ममी रमना थापा योल्मो हो हो । म १३ वर्षको भए । आजभन्दा २ वर्ष अगाडी म कक्षा ७ मा पोखरामा अध्ययन गर्दै थिए । मेरो बालापन साथीहरुसंग हाँस्दै खेल्दै निकै रमाइलोसंग बितिरहेको थियो । एक दिन म सामान्य विरामी परेँ र मेरो बाबाले मलाई उहाँको चिनजान वालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज सुवेदीसंग चेकजाँच गराई सिबिसि र पिबिएस गराउनुभयो । त्यसपछि उहाँले मेरो बाबालाई भनेर मलाई तुरुन्त काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पताल लैजाने सल्लाह दिनुभयो । रिपोर्टमा के थियो मलाई थाहा भएन । म ज्वरोले लठ्ठ परेर सु्तिरहेको थिए । त्यस रात मेरो घर परिवारमा सुनसान छायो मानौं पृथ्वी हाम्रै घरमाथि बज्रिए जस्तो । भोलिपल्ट विहान मेरो बाबा ममी, र दिदीले मलाई कान्ति वाल अस्पतालमा ल्याउनुभयो । सवै जाँच गरेपछि थाहा भयो मलाई एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकेमिया अर्थात ब्लड क्यान्सर लागेको रहेछ । मेरो उपचार त्यस अस्पतालका सिंगल क्याविन शुरु भयो । मलाई प्रमुख अंकोलोजिष्ट डा.प्रकाश निधि तिवारी, डा.अञ्जली पण्डीत र अरु डाक्टरहरुले जाँचिराख्नुभएको थियो । एकदमै हसिलो र मिलनसार डा.अनिल खरेललाई पनि आज सम्झन चाहान्छु । उपचारको क्रममा थाहा पाँए कि त्यहाँ त म जस्तै धेरै क्यान्सर विरामी बालबालिकाहरु क्यान्सर विरुद्व लडिरहेका रहेछन ।
समय वित्दै गयो । १३/१४ महिनापछि डा. प्रकाशको रिटायर्डसंगै मपनि कान्ति वाल अस्पताल छोडी चावाहिल स्थत ओम अस्पतालमा आए । आजसम्म पनि म डा.प्रकाशसंग नै उपचार गराई रहेको छु । आजको दिनसम्म आईपुग्दा मैले ६ साइकल मेजर केमो सिध्याएर चौथो मेन्टिनेन्समा आइपुगेको छु ।
क्यान्सर सरुवा रोग होइन । म भन्न चाहन्छु तपाँईहरु हामीसंग डराउनु पर्दैन बरु हामी तपाँईहरुबाट जोगिनपर्छ हामीलाई इन्फेक्सन हुन्छ कि भनेर । क्यान्सर शव्द सुन्ने वित्तिक्कै हर कोही मानिसहरु डराउने गर्नुहुन्छ । अनि लामो जिव्रो निकाल्दै सोध्ने गर्नुहुन्छ डाक्टरले के भन्नु भाको छ ? यस्तो सुन्दा पिडा त अवश्यै हुन्छ नि । अन्जानमा यो रोग लाग्यो मेरो के दोष ? अझ अस्पतालमा केमो चढाएर बस्नु पर्दाको पीडा कसलाई सुनाउनु ? खान मन लाग्दैन । खायो कि वान्ता हुन्छ । शरीरमा शक्ति हुदैन । ठिक–ठिक समयमा औषधिहरु खानुपर्ने । सर–सफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने । इनफेक्सन हुन्छ भनेर जोसुकै मानिसहरुलाई आफ्नो नजिक आउन दिनु नहुने । डाक्टर र डाइटिसियनको सल्लाह अनुसार सफा र पोषिलो खानेकुराहरु मात्र खानुपर्ने । यस्तो बेलामा कसलाई पिडा हुँदैन र ?
झन हामी त वालवालिका । खान नहुनेकुरा खान मन लाग्ने, जान नहुने ठाँउमा जान मन लाग्ने । हामीजस्तै साथीभाईहरु झोला बोकेर स्कुल गइरहेको देख्दा, हाँस्दै-हाँस्दै यताउता दौडिरहेको देख्दा आफ्नो मन पनि चञ्चल हुँदो रहेछ । सवै साथीहरु पढ्दै, खेल्दै आफ्नो वालापन विताईरहेका छन् आफु चाँहि अस्पतालको बेडमा घरि हातमा, घरि खुट्टामा सुईले घोचिँदै, वान्ता गर्दै, ज्वरो सहँदै, विभिन्न औषधिहरु खाँदै बस्न परिरहेको हुन्छ । अस्पतालको बेडमा या घरमा आराम गरिरहँदा म पनि उनीहरु जस्तै खेल्न पाए, झोला बोकेर स्कुल जान पाए कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि । तर के गर्नु ? हाम्रो विवशता । जन्म त पायौँ तर क्यान्सर रोगसंग लड्नुपर्ने हाम्रो भाग्य । आज हामी क्यान्सर रोगी विरामीहरुले पनि सुन्दर भविष्यको सपना सजाएका छौं । त्यसैले हामी यो क्यान्सर रोगसंग लड्नै पर्छ, लडिरहेका छौ । हाम्रो जित सुनिश्चित छ ।
अवस्था जे जस्तो भएता पनि आज यो स्टेजमा उभिएर मेरो बारेमा र मेरा साथीहरुले पनि भोगेको, अनुभव गरेको पीडाहरु यहाँहरु मझ वाँडन पाउँदा मलाई धेरै आनन्द लागेको छ ।
यस कार्यक्रमको आयोजक संस्था नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धिले “नेपालीको क्यान्सरको उपचार नेपालमा नैै” भन्ने नारालाई अगाडी सारेको छ । अब हामी जस्तो क्यान्सरका विरामीहरु उपचार गर्न विदेश जान पर्र्र्र्दैन । नेपालमा नै उपचार सम्भव छ भन्न चाहान्छु । मेडिकल साइन्सको अनुसन्धान र अविस्कारबाट विभिन्न क्यान्सर रोग निको पार्ने औषधिहरु बजारमा उपलब्ध गराई भएको छ । हामीले हार खानुहुदैन । रोग लाग्यो भन्दैमा निराश हुनुहँुदैन । मात्र हामी भित्र ईच्छा शक्ति जगाउनु पर्छ । यो संसारमा असम्भव केही छैन । आज म दिन प्रति दिन स्वस्थ हुदै गएको महसुस गरिरहेको छु । मलाई पुर्ण विश्वास छ । यहाँ उपस्थित म जस्तै क्यान्सरका विरामी साथीहरु पनि स्वस्थ हुँदै जानु भइरहेकोछ । यो क्यान्सरसंगको लडाँईमा हाम्रो जित अवश्य हुन्छ । र यो जितमा हामी क्यान्सर विरामी वालवालिकाहरुको तर्पmबाट विशेष आभार प्रकट चाहन्छौ । हाम्रा ती सम्पुर्ण आमा–बाबा र आफन्तहरुलाई जसले आफ्नो छोरा–छोरीको निम्ति रात–दिन नभनी, घाम–पानी नभनी, भोको पेट नभनी, आफु विरामी नभनी सबै सबै दुःख सहेर हामीलाई स्याहार सुसार गर्नुभयो । हामी धन्यवाद दिन चाहान्छौंँ नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्विलाई जसले आज यो भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरि हामीलाई थप हौसल्ला प्रदान गर्नुभयो ।
अन्तमा म मेरो व्यक्तिगत तर्पmबाट विशेष विशेष आभार प्रकट गर्न चाहान्छु डा।प्रकाश निधि तिवारी सरलाई । आजको यो अवस्था सम्म आइपुग्नु नै उहाँको ठुलो योगदान हो । म धन्यवाद दिन चाहान्छु डाक्टर अन्जली पण्डितलाई पनि, उहाँको पनि विशेष योगदान रहेको छ म माथि । म धन्यवाद दिन चाहान्छु अन्य डाक्टर र नर्सहरुलाई जसले हाम्रो उपचारमा साथ दिनुभयो । मैले जति धन्यवाद भनेपनि यो शब्द हजुरहरुको निम्ति थोरै हुन्छ । मलाई रक्तदान गर्नुहुने सम्पुर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । निरन्तर सु–स्वास्थ लाभको कामना गर्नु हुने सम्पुर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अन्तमा हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै थप आशिर्वाद ग्रहण गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो ममी,बाबा,दिदीहरुलाई तथा सम्पुर्ण आफन्तहरुलाई जसले मेरो निम्ति अभैm पनि संघर्ष गरिरहनु भएको छ । धन्यवाद ।
तस्वीर : बलराम प्यासी